Oversized Chunky Knit Sweater - Buddhatrends
$51.80 $74.00 သငျသညျ (30% Save$22.20)
ဖုန်ထူပန်းရောင် / တစ်ခုမှာအရွယ်အစား ဂျက်က Black / တစ်ခုမှာအရွယ်အစား
သငျသညျနီးပါးမည်သည့်အခါသမယတွင်ဝတ်ဆင်နိုင်ပါတယ်တဲ့ပူနွေးတဲ့, စွယ်စုံအပိုင်းအစရှာနေနေတယ်ဆိုရင်, ဒီဆွယ်တာအင်္ကျီတကား! တစ်ဦးအမှုထမ်း neckline နှင့်ကေဘယ်လ်ကြိုးခညျြနှောငျနှငျ့အတူ, ဒီဆွယ်တာအင်္ကျီစားဆင်ယင်အလွန်စတိုင်နှင့်အဆင်ပြေသည်။ သငျသညျစတိုင်ဆောင်းတွင်းသို့ခြေလှမ်းအဖြစ်ကုန်တိုက်ဒါမှမဟုတ်ပန်းခြံမှာရှည်လျားကျန်းမာလမ်းလျှောက်ရန်ခရီးစဉ်ကနေ, ဒီအဆမတန်ကြီးမားဆွယ်တာအင်္ကျီနွေးသငျသညျစောငျ့ပါမညျ။ သင်အကြိုက်ဆုံးကြည့်သိရှိစေရန်ရန်သင့်ရွေးချယ်မှုမဆိုဆက်စပ်ပစ္စည်းအတူကတွဲ!
ကိုယ့်ကျောင်းကပွဲနှင့်မင်္ဂလာဆောင်တွင်ဆင်မြန်း၎င်းတို့၏ဓါတ်ပုံကိုဖွင့်နဲ့တူမဟုတ်မည်သို့ဓါတ်ပုံကိုဖွင့်အများအပြားမြင်ကြပြီအဖြစ်ဈဝယ်ယူမှုအဝတ်အစားနည်းနည်းဦးနှောက်အာရုံကြောဖြစ်ခဲ့သည်။ အရမ်းကျေနပ်ငါ၏အဆွယ်တာအင်္ကျီရောက်လာတဲ့အခါ !!!!! ကပုံအတိအကျကဲ့သို့ဖြစ်၏ပြီးပြည့်စုံမထိုက်မတန်ကြီးနှင့် soooooo ပျော့ဖြစ်ပါတယ် !!! ကိုယ်လုပ်ကိုင်ဖို့ကဝတ်ဆင်ခြင်းနှင့်အများအပြားဖြည့်စွတ်လက်ခံရရှိ !!!! ကိုယ်ကြိုက်တယ်!!!!
ငါ *** ဃ
ငါ၏အကှကျလက်ခံရရှိခဲ့သည်, အရာအားလုံးဒဏ်ငွေပါ! ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်!
စူပါ, အစာရှောင်ခြင်းရေကြောင်းကျိကျိတက်, လက်ဆောင်များအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ငါ *** s ကို
အလွန်ကောင်းသောပစ္စည်းများ .. အလွန်အစာရှောင်ခြင်း delivey ... ကျေးဇူးတင်စကားစာရေး ...
K သည် *** r
အို *** ဏ
တော်တော်နွေးဆွယ်တာအင်္ကျီအသံအတိုးအကျယ်, ။ လွတ်လွတ်လပ်လပ်ထိုင်လျက်နဲ့တူ size ကို။
ပိုကြီးတဲ့အရွယ်အစားပုံထဲကထက်, အထည်တိုတောင်းစေ, ဒါပေမယ့်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အကြီးအကြည့်! အဆိုပါဇာထိုးပြုလုပ်ဆေးထည့်ခြင်းနှင့် :) မော်စကို Delivery ဝတ်ထားစဉ်အထဲတွင်မည်သည့်တွင်းစေခြင်းငှါမအလွန်သတိထားပါရန်လိုအပ်သောဖြစ်ပါသည်, အလွန်နူးညံ့သိမ်မွေ့သောဖြစ်ပါသည်, ရုရှား 18 ရက်ပေါင်းယူ - ဤရောင်းချသူအမြဲဿုံမြန်ဆန်တိကျမှန်ကန်ပါ! ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်!
S က *** မင်း
အစာရှောင်ခြင်းရေကြောင်း, ကောင်းသောအရည်အသွေး, ကောင်းသောရောင်းချသူနှင့်အလွန်လှပသော !!! တဖန်ငါအမိန့်ပါလိမ့်မယ် ;-) ကျေးဇူးတင်ပါသည်
ဤမျှလောက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်, ကို item ဆိုင်အကြံပြု, မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့အရည်အသွေးတင်ပို့ဖော်ပြချက်များနှင့်အရွယ်အစားကိုက်ညီ။
V ကို *** ဎ
M က *** ဇ
ကောင်းသော pullover အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အရည်အသွေးကို။ оверсайзစတိုင်။ အရွယ်အစား 54 168 စင်တီမီတာအမြင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုအလွန်ချောင်အလုံအလောက်ရှည်လျားသုံးလေးပုံတစ်ပုံစွပ်အိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ ရုပ်ပုံအဖြစ်အရောင်။ ရောင်းချသူမှစူပါအစာရှောင်ခြင်းရေကြောင်းကျေးဇူးတင်စကား။ အကြံပြုပါသည်။
R ကို *** v
F ကို *** r
алтайскогоအစွန်းတင်ပို့မတိုင်မီ 17 ရက်။ ထိုးပြီးပါးလွှာဆွယ်တာအင်္ကျီ, ဖြောင့်ချုပ်, ချည်ကပ်ဘူး။ ကြှနျတေျာ့အမြင့် (160 စင်တီမီတာ) ဒူးအလေးချိန် (65кг) အင်္ကျီလက်ချောင်ပေမယ့်အလေးချိန် (90) လက်တင်းကျပ်စွာအထက်တွင်အရှည်ရှေ့။ ယေဘုယျအားဖြင့်သုံးလေးပုံတစ်ပုံကျေနပ်မှုဝယ်ယူအိတ်။
တကယ်ဆွယ်တာအင်္ကျီ, သဘာဝကသိုးမွှေး! စိတ်ကျေနပ်မှုဈယ်ယူ !!!5+ + + + + + +
စားဆင်ယင်-စူပါ။ ပျော့အလင်းအဆင်ပြေ။ ပဲစူပါ။ အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ရောင်းချသူမြန်ဆန်ပေးပို့။ မြင့်မားဖို့အထူးအကြံပြုလိုတယ်။
N ကို *** ဏ
အဆမတန်ကြီးမားရှည်လျားသော Hippie စားဆင်ယင်
အဆမတန်ကြီးမားရှည်လျားသော Hippie စားဆင်ယင် $89.00
စပျစ်သီးကို Gypsy Maxi Dress
စပျစ်သီးကို Gypsy Maxi Dress $53.40 $89.00
အမြိုးသမီးမြားအဘို့အချောင် 90s ခြုံငုံ
အမြိုးသမီးမြားအဘို့အချောင် 90s ခြုံငုံ $32.40 $54.00
အဆမတန်ကြီးမားအလွှာ Bohemian Dress
အဆမတန်ကြီးမားအလွှာ Bohemian Dress $40.20 $67.00
Plus အားအရွယ်အစားအဆမတန်ကြီးမားအင်္ကျီ Dress $42.00 $60.00
အနုပညာရှင်ရဲ့ Way ကို Abstract Dress
အနုပညာရှင်ရဲ့ Way ကို Abstract Dress $121.00
မြည်းကြိုးကိုဖြည် Sleeveless Maxi Dress
မြည်းကြိုးကိုဖြည် Sleeveless Maxi Dress $89.00
ပန်းပွင့်ကို Power Maxi Dress
ပန်းပွင့်ကို Power Maxi Dress $76.00
အပြာရောင်ဒေါင်းအလံ Chiffon Boho Maxi Dress
အပြာရောင်ဒေါင်းအလံ Chiffon Boho Maxi Dress $53.40 $89.00